Tani waa codsigii ugu horreeyay ee lagu dabaasho Apple Watch | Wararka IPhone
Apple Watch waa biyo adkaysi u leh inkasta oo leh nuunisyo. Intii lagu guda jiray soo bandhigiddeeda, shirkadda tufaaxa waxay carrabka ku adkaysay inaanan awoodin inaan quusinno saacadda, in kasta oo ay ku mahadsan tahay shahaadadeeda IPX7, waxay u adkeysan kartaa buufin dhib la'aan.
Kuwii horeyba u awooday inay tijaabiyaan, waxay xaqiijiyeen inkasta oo tilmaamaha Apple, smartwatch lagu quusin karo qoto dheer iyo waqti xaddidan, dabcan, kahor intaan biyo gelin gudaha guryaheeda, damaanad qaadka ayaa si otomaatig ah loo burin doonaa u hogaansamida talooyinka soo saaraha.
Qaar ka mid ah horumariyeyaashu waxay go'aansadeen inay ka gudbaan talooyinka Apple ee ku saabsan dharka dharka dabbaasha iyo sababtaas darteed, waxay abuureen barnaamijkii ugu horreeyay ee loogu talagalay Apple Watch iyo dabaasha. Barnaamijkani wuxuu kuu oggolaanayaa inaad kormeerto xuduudaha aasaasiga ah ee kulanka isboortiga, adigoo ka faa'iideysanaya qalabka saacadda iyo hagaajinta lagu sameeyay HealthKit.
Si kastaba ha ahaatee, codsigan loogu talagalay Apple Watch ma arki doono iftiinka ilaa aad ka joojineyso ku xadgudubka qaanuunka 13.1 ee sharciyada u dirista App Store. Sharcigani wuxuu qeexayaa in horumariyahu uusan soo rogi karin codsiyo ku dhiirrigelinaya dadka isticmaala inay u adeegsadaan aaladda Apple si aan habboonayn taasina waxay u horseedi kartaa wax soo saarka laftiisa.
Xaaladdan oo kale, Apple Watch laguma quusin karo biyo marka waxaan aad uga baqayaa in kooxda dib u eegista App Store aysan aqbali doonin ilaa aan ka heleyno nooc ka mid ah saacadaha hagaajinaya cilladan.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Alaabada Apple » Apple Watch » Kani waa codsigii ugu horeeyey ee aad kula dabaalato Apple Watch laakiin ma awoodi doontid inaad soo dejiso
Shaxanka iPhone 6s waxaa lagu sifeeyey dhumuc xoogaa yar